VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ na-emeghe isi software nke a na-achị free mgbasa ozi ọkpụkpọ ahia maka gburugburu afọ 12. E guzobere ya na 2001 site na aha VideoLan. Ọ bụ a anaghị uru nzukọ nke na-ekwere na ọrụ. The VLC ọkpụkpọ dị maka ọ bụla sistemụ arụmọrụ na ngwaọrụ ọ ga-abụ Windows, Android ma ọ bụ iPhone, iPad, laptọọpụ. VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ ihe kasị họọrọ ọkpụkpọ ekele ya egosipụta ọtụtụ ihe. Ọ nwere ike igwu fọrọ nke nta bụla mara ọdịyo na video format, viz. MPEG, MKV, 3GP, DivX, AVI na ọtụtụ ndị ọzọ yiri formats. The mgbasa ozi ọkpụkpọ e mere na-ezu okè.
VLC na nso nso ulo oru ya ọhụrụ version 2.2.1 nke bụ ikenyeneke mbiet. Ọ nwere ọrụ enyi na enyi interface na dị na otutu asụsụ kwa. Ọ nwere dịgasị iche iche nke nhọrọ na ya kitty nke ike-eji welie media mma. Ọ nwere obosara ọdọ mmiri nke nhọrọ na ngwá ọrụ maka ọrụ dị ka audio stabilization, machite, AtmoLight video mmetụta, graphic equalizer na ọtụtụ ndị dị otú ahụ nhọrọ nke na-eme ị na-elele na-ege ntị ọbụna ihe enchanting. The mgbasa ozi ọkpụkpọ na-nwere atụmatụ mmekọrịta nke na-enyere ndị ọrụ iji nweta media faịlụ echekwara na iche iche na ngwaọrụ.
The VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ nwere ike ibudata site http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html nke bụ ya ukara website. Ọ nwekwara ike ebudatara site ọzọ weebụsaịtị, viz.
The VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ nwere ike ibudata na arụnyere iji eso nzọụkwụ
Pịa na ukara njikọ ma ọ bụ ihe ọ bụla nke 5 n'elu kwuru banyere njikọ ibudata ntọlite ​​faịlụ.
Ugboro abụọ click na ntọlite ​​icon na-amalite na nwụnye usoro.
Pịa 'Ee' iji nye ikike na ibugharịa na nzọụkwụ ọzọ.
Họrọ otu installer asụsụ ie English. Pịa na OK.
Ọzọ igbe ga-emeghe. Na-aga n'ihu na echichi, pịa Next
License Agreement igbe ga-emeghe. Ọzọ pịa Ọzọ.
Họrọ components nke ị chọrọ ibudata na pịa Next na-aga n'ihu.
Buru a ọnọdụ ebe ị chọrọ ntọlite ​​faịlụ ntụgharị mbanye (C / D / E) na pịa wụnye.
Chere ruo mgbe echichi completes, wee pịa on rụchaa na-agba ọsọ VLC media ọkpụkpọ.
Ugbu a ịdọrọ na dobe media faịlụ na window nke VLC Media Player. Play ọ bụla media faịlụ. I nwekwara ike nweta gị media n'ọbá akwụkwọ site VLC.
Ụfọdụ screenshots nke VLC ọkpụkpọ maka Windows 8
VLC bụ ịrịba ama na mfe iji ọkpụkpọ nke nwere ike igwu nta ọ bụla media usoro. Ọ na-kwajuru na ikenyeneke mbiet atụmatụ nke na-enye na-akpali akpali na-agaghị echefu echefu ahụmahụ na-ya ọrụ. On dum ọ bụ oké ọkpụkpọ nke natara a stupendous nzaghachi nke ikpeazụ afọ 12. Àgwà nke ọkpụkpọ a mma site gwara chinchi na mkpọka. Ọ abịa na a ọhụrụ mma nke oge zọ. The size nke nwụnye faịlụ nke VLC 2.2.1 64 bit exe faịlụ bụ nanị 28,45 MB. The mgbasa ozi ọkpụkpọ dị na otutu asụsụ dị ka Spanish, Swedish, Thai, Dutch na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ajụjụ: Mgbe m emelitere-Windows 8.1 na arụnyere VLC 2.2.0, ọ jiri. Gịnị ka m kwesịrị ime?
A: Malitegharịa ekwentị ahụ na usoro na im wụnye media ọkpụkpọ. Ọ bụrụ na nsogbu ka nọgidekwara, na-aga http://nightlies.videolan.org/build/win32/last/~~V
Ajụjụ: VLC 2.2.0 jiri na na na arụ orụ audio faịlụ na i nwụnye. Ọ bụla pụrụ inyere aka?
A: Wụnye 8.1 ọzọ na ihichapụ nhazi faịlụ. Ọ bụrụ na nsogbu na-aga n'ihu, kpọtụrụ nkwado Forum.
Ajụjụ: Mgbe ọ bụla m na-egwu a video, ọkpụkpọ mkpọka. Gịnị ka m kwesịrị ime?
A: Ị nwere ike imeghe regedit na ihichapụ a sub-isi ihe maka NMgamingms.sys ọ bụrụkwa na nsogbu ka ịnọgide kọntaktị nkwado Forum.
> Resource> VLC> Jiri VLC maka Windows 8 were were!